Xaaladda deegaanka Dhumay ee Koonfurta Laascaanood oo degan – Radio Daljir
Xaaladda deegaanka Dhumay ee Koonfurta Laascaanood oo degan
Oktoobar 24, 2018 4:33 b 0
Wararka ka imaanaya deegaanka Dhumay ee koonfurta Laascaanood ayaa sheegaya inay degantahay xaaladda deegaanka Dhumay oo ay shalay iyo daraad dagaallo ay ka dhaceen dad badan lagu dilay, kuwana dhaawacanyihiin.
Dagaalka ayaa iskiisa u istaagay, mana jirto wali wax ciidamo oo kasocda Somaliland iyo odayaal dhaqan oo deegaanka gaaray si xaaladda loo qaboojiyo, sidaasina waxaa radio Daljir u sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka oo magaciisa diiday in la faafiyo.
Waxaa uu sheegay xaaladda inaan la qiyaasi karin, waxa ay ku dambayn karto, dadkii deegaanka joogay ayaa barakacay intooda badan.
Dhimashada ilaa iyo hadda waa 60 qof dad ka badan, halka dhaawacana uu yahay boqol qof dad ka badan.
Soomaaliland oo dib ucelisay deeq daawo ah oo ka timid dowladda Soomaaliya
Aqalka Sare Soomaaliya oo soo dhoweeyey guddi kala shaqaynaya xukuumadda khilaafka maamul goboleedyada